Codso ceebaha - Sida loo sameeyo iyadoo loo eegayo wejigaaga | Bezzia
Susana godoy | 15/09/2021 12:00 | Quruxda
Ma taqaan sida loo dalbado ceebta? Runtii waxay umuuqataa wax aad u fudud mana aha inay tahay inaan isku qasno wax badan, laakiin mararka qaarkood haddii aynaan raacin talaabooyinka ku habboon, natiijadu ma noqon karto midna. Marka, waa waqtigii la ogaan lahaa sida ay tahay inaan u sameyno iyadoo ku xiran nooca wejiga aan leenahay.
Mar haddii waxa aan rabno mar walba yahay muuji qodobbadayada iyo qaybaha ugu fiican, marka tan waxaan u baahanahay talada ugu fiican. Waxaa laga yaabaa in aad u malaysay in ceejintu aysan lahayn cilmi badan marka ay timaaddo in la adeegsado, laakiin sida aad arki doonto waxa kale oo ay leedahay xeelado yaryar. Markaa, naftaada ha lagu qaado dhammaantood waxaadna arki doontaa natiijooyinkaas waaweyn ee aad filaysay.
1 Sida loo mariyo wajiga labajibbaaran
2 Sida loo mariyo wajiga oval wajiga
3 Waji wajiga wareegsan mari
4 Wajiyo aad u dheer
5 Weji saddex gees leh
Sida loo mariyo wajiga labajibbaaran
Waxaan ku bilaabaynaa wejiga afargeeslaha ah, kaas oo ah mid leh daan si cadaalad ah u calaamadsan oo xagasha xagasha ah. Sidaas si la mid ah, dhabannadaadu aad bay caan u noqon doonaan tanina waxay ka dhigan tahay inaan raacno tallaabooyin taxane ah si aan u awoodno inaan ku dabaqno ceebta. Maadaama aan rabno, waa inaan siinno dhammaystiran macaan wejiga loogu yeero sida adag. Sidaas, waxaynu raadinaynaa lafaha dhabannada oo waxaynu iftiimin doonaa qaybta sare. Waxay joogi doontaa meesha aan ka codsanayno ceebta laakiin mar walba dhinaca ugu sarreysa. Samee dhaqdhaqaaqyo wareegsan oo aagga ah si aad si fiican isugu dhex gasho waxaadna ogaan doontaa sida taabashada dhallinta badan loo soo bandhigay ilbidhiqsiyo gudahood.
Sida loo mariyo wajiga oval wajiga
Sidoo kale waa mid ka mid ah wejiyada sida caadiga ah caadi u ah oo kiiskan, waa in la sheegaa inay leeyihiin qaybta dhabannada oo ka ballaaran aagga garka iyo xitaa foodda. Markaa, tani waxay caddaynaysaa inay durba kor u qaadayso dhabannada, sidaa darteed kala -duwanaanshahan ayaa naga dhigaya inaan la yaabno sida loo rido indho -beelka. Runtu waxay tahay inay iyaduna tahay tallaabo fudud oo ah, waxaan ballaarin doonaa aagga oo waxaannu dul dhigi doonaa dhabannada oo dhan, halkii ay ka ahaan lahayd uun qaybta dhabannada. Laakiin haa, si fiican ayaa u khafiifsan oo leh midabyo khafiif ah sida fersken oo had iyo jeer ka mid ah kuwa ugu cadcad. Isku day inaad midabka ka dhigto bartamaha ilaa meelaha u dhow.
Waji wajiga wareegsan mari
Markaan ka hadlayno wejiyada wareegsan, waxaan sheegnaa kuwa leh masaafo aad isugu dhow dherer ahaan iyo ballac ahaanba, sidaa darteed qaybaha xaglaha waa la tuuraa laakiin haa, dhabannada dhabannadu badiyaa waa ballaaran yihiin. Haddaba sida loo codsado ceebta si ay nooga caawiso inaan muujino quruxdeenna, aad u fudud. Xaaladdan ayaa ugu fiican ku dabool wax ka hooseeya lafta dhabankaaga kana fog qaybta dhabannada. Way fiicantahay inaad u samayso si kor u kac ah sidii midabka oo kale inuu gaaro macbudyada. Sababtoo ah waa hab lagu dheereeyo aaggan.
Wajiyo aad u dheer
Wejiga noocan ahi wuxuu garka ka dhigayaa mid aad u dheer oo cidhiidhi ah, kaasoo noqda mid caan ah. Laakiin waa run in cidhiidhnimada dhabannadu sidoo kale way ka soo baxaan. Sababtoo ah, Way ku habboon tahay in la sameeyo nooc ka mid ah xarriiq toosan oo ka baxda aagga sanka ilaa ku dhowaad dhegaha. Sababtoo ah waa hab lagu jebin karo sawirkaas dhererka ah ee wejigan leeyahay oo la soo gaabiyo, xitaa haddii ay tahay kaliya heerka saamaynta indhaha.
Weji saddex gees leh
Badanaa waa weji dhuuban oo foodda cidhiidhi ku tahay laakiin daanku ballaaran yahay. Sidaas, si ay u isku dheelitir dhammaan goobahan oo dhan waxaan u adeegsan doonnaa ceebta si sax ah. Xaaladdan waxaan ku samayn doonaa nooc ka mid ah xariiqa qaybta sare ee dhabannada. Wax sidoo kale ku dhacay wejiga nooca laba jibbaaran. Waa inaad mar walba raacdaa qadka dabiiciga ah ee dhabannada la yiri. Hadda mar dambe ma haysatid marmarsiiyo aad ku muujiso wejigaaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Sida loo marsho ceebta wajigaaga